Indro ny sasantsasany amin’ny hiram-bahoaka ao Moldavia mandray anjara amin’ny kolontsain-tsary-sy-soratra manerantany · Global Voices teny Malagasy
Indro ny sasantsasany amin'ny hiram-bahoaka ao Moldavia mandray anjara amin'ny kolontsain-tsary-sy-soratra manerantany
Voadika ny 21 Aogositra 2019 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Español, Italiano, English
Tambatsary nopihana an'efijery avy amin'ny lahatsarin'ny “Numa Numa Dance” avy amin'i Gary Brolsma, “Dragostea Din Tei” avy amin'i O-Zone, ary “Run away” avy amin'i Sunstroke Project & Olia Tira. Fampiasana azy araka ny tokony ho izy.
Vitsy ny olona hihevitra ny herin'ny indostirian'ny hira ao Moldavia. Tafiditra ao anaty zoron'i Eoropa atsinanana, ny ankamaroan'ny vaovao iraisampirenena momba azy dia mifantoka manodidina ny politika, izay mifandraika matetika amin'ny maha-tafiditra ny firenena eo anelanelan'ny faritra ao anatin'ny taratry ny Vondrona Eoropeana sy ny taratra Rosiana.
Na izany aza dia mahatalanjona fa miezaka mivoaka amin'ny fiforetan'ny sisitanim-pireneny ny hira pop ao aminy, ary ny tena marina dia manana fiaviana Moldavy ny sary-sy-soratra roa malaza manerana izao tontolo izao.
Raha efa niditra an-tserasera ianao 15 taona lasa izay, dia hahatsiaro mihitsy ny Numa Numa Dance, lahatsary iray malaza talohan'ny vanim-potoanan'ny YouTube. Ilay sary feno mangorovitsika tamin'ny webcams tamin'izany fotoana manasogadina ny molotry ny tanoralahy bota iray toy ny mihira mihitsy ny hira “Dragostea Din Tei,” avy amin'ny hiran'ny tanoralahin'ny 2000s Moldavy O-Zone.
Araka ny iditra Wikipedia momba ilay lahatsary, ilay lehilahy dia ilay vilaogera amerikana Gary Brolsma, izay nampiditra ny lahatsary tao amin'ny tranonkala Newgrounds tamin'ny anaran-tserasera gman250 tamin'ny Desambra 2004. YouTube anefa najoro roa volana taty aoriana, tamin'ny febroary 2005.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy monja dia nahazo jeripejy an-tapitrisany ny lahatsary. Nesorina izany tamin'ny taona 2016, saingy tsy talohan'ny nampidirana ireo kopiany hatraiza hatraiza sady nanome aingam-panahy mpampihomehy ampolony.
Navoaka tamin'ny jolay 2003 ny “Dragostea Din Tei” ary lasa nalaza manerantany ny taona manaraka io. Nilaza i Brolsma fa ny nahenoany voalohany indrindra ny hira dia tamin'ny sarimiaina japoney nahitana saka maromaro.
Ny lohateny “Dragostea Din Tei” amin'ny teny Romanian/Moldavy dia midika ara-bakinteny hoe “Fitiavana avy amin'ny [hazo] linden.” Tsy misy dikany ny voambolana fampidirana (“Ma-ia-hii…”). Mandeha ny tononkira :
Izay azo adika manao hoe:
Te-handao ianao saingy tsy te-hitondra ahy,
Tsy te-hitondra ahy, tsy te, tsy te-hitondra ahy
Niaraka tamin'io hira io, namoaka lahatsarin-kira izay manambatra hetsika mivanana ahitana ireo fanorolahin'ny tantara antsary ilay tarika pop Moldavy. Nandritra ny taona maro mifandimby, marika maro manerana izao tontolo izao no nahazo zo tamin'ilay sary, ary nivoaka tamin'ny teny ampolony hafa, toy ny anglisy, Hongroà, Hebreo, Indoneziana, Afrikaans, ary Japoney ny voatra tamin'izany.
Epic Sax Guy: Tao amin'ny Eurosong ary niverina
Sary-sy-soratra iray hafa malaza manerana izao tontolo izao nahazo aingm-panahy tamin'ny hira pop Moldavy ny “Epic Sax Guy.” Mpilalao saxophone iray manao fitendrena samirery nefa manintona, ary mifototra amin'ny zavabitan'ny iditra Moldavy tamin'ny Eurovision 2010, ilay fifaninanan-kira 60 taona izay mampiray ny kaontinanta iray manontolo isa-taona amin'ny alalan'ny fijerena TV maro.
Nahazo ny laharana faha-22 amin'ny mpandray anjara miisa 39 ny hira “Run Away,” avy amin'i Sunstroke Project & Olia Tira, amin'ny fifaninanana taona 2010. Nahazo jery mihoatra ny valo tapitrisa ny lahatsary ofisialy tao amin'ny fantsona YouTube an'ny Eurovision. Raha nanome fampisehoana mora tsaroana amin'ny fiakanjo sci-fi nalaza tamin'ny taompolo 1980 ny tarika iray manontolo tamin'izany fotoana izany, dia lasan'ilay mpitendry saxophone antsoina hoe Sergei Stepanov kosa ny fifantohana tamin'ny seho.
Ohatra iray amin'ny fampiasana ny sary sy soratra Epic Sax Guy meme, avy amin'i KnowYourMeme.com, fampiasana araka ny tokony ho izy.
Taona maro taty aoriana, nanana ny fiainany manokana ny sary-sy-soratra “Epic Sax Guy” tato amin'ny aterineto. Nanome aingam-panahy tsy hita isa tamin'ny sarimiaina sy ny mpaka tahaka izany. Ao amin'ny Tube, misy lahatsary maharitra ora fola amin'ilay fitendrena samirery ny sax tao, ary ny sasany amin'ireny nahazo jery an-tapitrisany. Nandray anjara tamin'ny fanamby natsangan'ireo YouTubers manana ny ambaindainy hijery manontolo ireny lahatsary ireny ny olona.
Tsikaritra fa mahafantatra ireny “fiitarana” ateraky ny laza ireny ny mpamokatra hita Moldavy. Nandray anjara indray tamin'ny Eurovision ny Sunstroke Project tamin'ny taona 2017 tamin'ny hira “Hey Mamma,” izay namerina singa maro tamin'ny sary-sy-soratra tamin'ny Epic Sax Guy, ka nampidirina ihany koa ny voatra vaovao tamin'ny fihirana solo tamin'ny sax.
Nahatratra ny toerana fahatelo ny Sunstroke Project tamin'ny fampisehoana nataon-dry zareo tamin'ny fifaninanana taona 2017, izany no vokatra tsara indrindra azon'i Moldavia tamin'ity fifaninanana ity.
Aiza izy ireny izao?
Raha mbola miandry ny hiram-bahoaka moldavy ny tontolon'ny sary-sy-soratra hanolorana aingam-panahy vaovao, andao hojerentsika indray izany nitranga tamin'ireo maherifon'ity tantaran-daza taorian'ny aterineto ity.
Araka ny Wikipedia, nisaraka ny O-Zone tamin'ny taona 2005. Nikambana indray ny maro tamin'ireo mpikamban'ny tarika tamin'ny taona 2017 hanatontosa kaoseritra roa. Efa nesorina ny pejy ofisian'ny tarika ao amin'ny artists.universal-music.de/ozone, raha tsy nahitana fanavaozam-baovao intsony ny pejy Facebook hatramin'ny taona 2012.
Lasa nalaza tamin'ny aterineto i Gary Brolsma. Vao maika nitombo izany laza izany tamin'ny fivoahana imbetsaka tao amin'ny fampitam-baovao tao Etazonia. Izy no voafidy ho Number 1 Internet Icon tao amin'ny “Kinta-mamiratra fatratra 40 lehibe indrindra amin'ny aterineto” avy amin'ny fantsona fahitalavitra VH1, izay nahitana ny “Star Wars kid” teo amin'ny laharana faharoa. Ny taona tsara faharoa ho azy dia tamin'ny taona 2008, raha namoaka ny album solo voalohany izy ary nipoitra tao amin'ny ampahan-tantaran'ny South Park tamin'ny “Canada on Strike” [Mitokona i Canada] izay iray amin'ireo olomalazan'ny aterineto miandry ny fandoavam-bola azy ireo ara-teorika. Mbola manohy ny YouTubers mamokatra fanondroana sy setriny amin'ny lahatsariny, izay lasa olomangan'ny embona aterineto.
Mbola mavitrika ny The Sunstroke Project — mbola miasa ny tranonkala ofisialin-dry zareo na dia tsy manaraka andro loatra aza hatramin'izao, ka ny fomba tsara indrindra hahazoana ny hetsika farany ataon-dry zareo dia amin'ny alalan'ny horirana Instagram.
Niezaka i Olia Tira hisolotena indray an'i Moldavia tao amin'ny Eurovision tamin'ny taona 2014, tamin'ny anarana eny an-tsehatra FLUX LIGHT, saingy tsy tafavoaka tao amin'ny fifaninanam-pirenena. Mbola manohy ihany izy mihira amin'ny fiteny Romaniana/Moldavy ary Rosiana, ary vao efa-bolana monja izay no namoaka ny singleny farany izy.